သင်၏ Crawl Budget ကိုနားလည်ခြင်း - Semalt Expert ထင်မြင်ချက်
SEO ဆိုသည်မှာဘဝ၌အသစ်သောအရာများအမြဲတမ်းရှိသည့်ဘဝကဏ္ those တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလိုက်နာနေသောကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များအတွက်သင်တည်ရှိသည်ကိုမသိသေးသော SEO ၏ရှုထောင့်များအကြောင်းပြောသည့်ဆောင်းပါးများကိုသင်တွေ့ဖူးပြီသေချာသည်။ ဤအချက်က Semalt သည် SEO စကြာ ၀ universeာတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအပေါ်အသစ်တင်သည်သာမက Semalt ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ဖတ်ရှုနိုင်သောအသစ်သောအရာများအမြဲရှိနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
သင်သည်သင်၏ SEO ကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏တွားနေသောဘတ်ဂျက်သည်ပထမဆုံးဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ သငျသညျတွားဘတ်ဂျက်သည်အဘယ်အရာကိုတောင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည် "သင်ကဒီထက်ငါပိုက်ဆံပို။ ဖြုန်းဖို့လိုပါသလား?" သင်မသိနိုင်ဘူး ကောင်းပြီ, သင်တစ် ဦး crawl ဘတ်ဂျက်အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးရှင်းပြခြင်းအားဖြင့်သင်အဖြေကိုကူညီကြကုန်အံ့။
တစ် ဦး တွားဘတ်ဂျက်ကဘာလဲ?
Crawl ဘတ်ဂျက်ဆိုသည်မှာ SEO စက်မှုလုပ်ငန်းမှတီထွင်ခဲ့သောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာအရေအတွက်နှင့်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါမည်သည့်စာမျက်နှာများသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွားသွားမည်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကအသုံးပြုသောဆက်စပ်သဘောတရားများနှင့်စနစ်များကိုဖော်ပြသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုအာရုံစိုက်စေသကဲ့သို့သင်ကြည့်နိုင်သည်, ဒါဆိုမင်းကမင်းရဲ့ crawl ဘတ်ဂျက်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့မင်းထင်ရင်မင်းမှားသွားပြီ။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့တွန့်လိမ်နေသောဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပေးသည်၊ သို့သော်ဤဆောင်းပါးနှင့်အပြီးသတ်သောအခါ၊ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကျိုးပြုရန်ချိန်ခွင်များမည်သို့ရွေ့ရမည်ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Crawl budget optimization သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် bot များသည်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများသို့ဝင်ရောက်သည့်နှုန်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အဆင့်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတိုးမြှင့်မှုများကိုသင်မကြာခဏရောက်လေလေ၊ စာမျက်နှာများကိုပြုပြင်မွမ်းမံထားသောအညွှန်းသို့လျင်မြန်စွာရောက်သွားလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင်ပိုမိုတိုတောင်းသောကာလများအတွင်း web optimization ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုခံစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်ဤနည်းကိုမြင်ရပြီ၊ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏တွားနေသောဘတ်ဂျက်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအရေးကြီးရကြောင်းစတင်နားလည်လာပြီဖြစ်သည်။
ဘာကြောင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဆီကို crawl ဘတ်ဂျက်ကိုသတ်မှတ်တာလဲ
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင်အကန့်အသတ်မရှိသောအရင်းအမြစ်များမရှိပါ။ ရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုတစ်ခုထည့်သွင်းတိုင်းသူတို့၏ကန့်သတ်ထားသောအရင်းအမြစ်များကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည်။ စိတ်ချရလောက်အောင်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သူတို့၏တွားသွားအားထုတ်မှုများကို ဦး စားပေးရသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုစီသို့တွားသွားသောဘတ်ဂျက်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အချိန်တိုအတွင်းအမြင့်ဆုံးအသုံးဝင်သောရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုကူညီရန် ဦး စားပေးအတိုင်းအတာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
စဉ်းစားရန်ထိပ်ဆုံး SEO အချက်များစာရင်းတွင်မပါဝင်သောအရာတစ်ခုခုအတွက်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်ရသည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ, သင့်ရဲ့ web crawl ဘတ်ဂျက်အရေးကြီးပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ဒါမရှိဘဲ, Google ကသင်၏ website သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ index ။ ဘယ်တော့မှအဆင့်သတ်မှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဤသည်တွားဘတ်ဂျက်စည်စတင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။ အကယ်၍ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိစာမျက်နှာအရေအတွက်သည်သင့်ဆိုဒ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ဘတ်ဂျက်ထက်ကျော်လွန်ပါကသင်၌ရည်ညွှန်းချက်မရသည့်စာမျက်နှာများရှိလိမ့်မည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တော်တော်များများသည် crawl budget ကိုစိတ်ပူစရာမလိုသော်လည်းသင်၏ crawl budget ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စအချို့ရှိသည်။
ဆိုက်ကြီးတစ်ခုဖွင့်သောအခါ သင့်တွင်စာမျက်နှာ ၁၀၀၀၀ (စံ e-commerce ဝက်ဘ်ဆိုက်) ပါ ၀ င်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိပါကထိုစာမျက်နှာများအားလုံးကိုရှာဖွေရန် Google သည်အခက်တွေ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်စာမျက်နှာအသစ်အချို့ကိုထည့်ပြီးပါက အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီကသင်၏ site သို့ကဏ္aအသစ်တစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းထားပါက၎င်းတို့အားလုံးလျင်မြန်စွာရည်ညွှန်းခြင်းခံရမည်ကိုသိရန်သင့် crawl ဘတ်ဂျက်ကိုစိတ်ထဲထားရန်လိုအပ်သည်။
ဤအရာကိုပိုမိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်သင်ဤဂူဂဲလ်၏တရား ၀ င်ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည် ဂူဂဲလ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းသူ့ဟာသူတွားတာဟာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအချက်ကိုသိခြင်းသည်အချို့သော SEO ပညာရှင်များကိုသူတို့၏တွယ်နေသောဘတ်ဂျက်ကိုတိုးတက်စေရန်အားထုတ်ခြင်းမှတားဆီးရန်လုံလောက်သည်။ များစွာသော SEO ပညာရှင်များသည် "အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်သောအချက်" ကို "ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်မတူပါ" ဟုဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ At Semaltကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်မထင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO နှင့်ဝက်ဘ်စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်များတစ်လျှောက်လုံး SEO သည်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ရုံသာမကသေးငယ်။ တိုးပွားလာသောအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်နှင့်မက်ထရစ်များစွာကိုဂရုစိုက်သည်သာမကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသိရှိခဲ့ရသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများပေးရန်ဤသေးငယ်သောအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့လည်းဂရုပြုပါသည်။
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်မှ John Muller မှပြောကြားသည်မှာ crawl ဘတ်ဂျက်သည်သူ့ဟာသူတွန့်လိမ်နေသောအချက်မဟုတ်သော်လည်းပြောင်းလဲမှုများနှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏တွန့်တွန့်သောဘတ်ဂျက်ကိုထိရောက်စွာထိခိုက်စေကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဤသည်မှာသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ robots.txt ကိုလက်ဖြင့်သို့မဟုတ် web auditor tool ကို အသုံးပြု၍ စီမံနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်အဘယ်သူမျှမသိသောသူဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ဖြစ်နိုင်သမျှအခါတိုင်းဒီ tool ကိုသွားရန်သင့်အားအကြံပေး။ ဤဥပမာတွင် tool တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ထိရောက်မှုရှိသည်။
သင် robot.txt ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော tool ထဲသို့ထည့်ရုံဖြင့်သင်၏ဒိုမိန်းပေါ်ရှိမည်သည့်စာမျက်နှာကိုမဆိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်တည်းဖြတ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းကိုတင်နိုင်သည်။ သင်လက်ဖြင့်လည်းပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အတွေ့အကြုံမှ၊ အထူးသဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကြီးတစ်ခုနှင့်ကိုင်တွယ်သောအခါကိရိယာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
သင့်ရဲ့ redirect ကွင်းဆက်ထွက်ကြည့်ပါ
ဒါကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ် သာမန်အသိ သင့်ဝဘ်ဆိုက်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်၏ဒိုမိန်းပေါ်တွင် redirect ကွင်းဆက်တစ်ခုတောင်မှပင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သို့သော်ကြီးမားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်၊ 301 နှင့် 302 redirects သည်သင်ကြုံတွေ့ရမည့်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဘာသာသူတို့ပြ,နာမရှိပါ၊ သို့သော်သင်ဤသံကြိုးများကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ထားပါကသင်၏တွားသွားကန့်သတ်ချက်သည်ထိုးနှက်ခံရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသွားသောကြောင့်တစ်ချိန်ချိန်တွင် search engine crawlers သည်သင် index လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စာမျက်နှာသို့မရောက်ရှိဘဲတွားသွားခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သည်။ သင်ပြန်ညွှန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုတွေ့လျှင်ထိတ်လန့်စရာမလိုပါ။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူတို့ပျက်စီးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လူတိုင်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။
တတ်နိုင်သမျှ HTML ကိုသုံးပါ
HTTP အမှားများသည်သင်၏ crawl budget ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုစားသည်။ စာမျက်နှာ ၄၀၁ နှင့် ၄၁၀ တို့သည်သင်၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပျက်စီးစေရုံသာမကသင်၏ crawl ဘတ်ဂျက်ထဲသို့ပါ ၀ င်သည်။ ထို့ကြောင့် 4xx နှင့် 5xx status codes အားလုံးကိုပြုပြင်ရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည် Win-Win အခြေအနေဖြစ်လာသည်။ ဒီအမှားကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာ web tool ကိုသုံးတာကပညာရှိရာရောက်တယ်။ SE အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် Screaming Frog စသည့်ကိရိယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှားများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ URL parameters တွေကိုဂရုစိုက်ပါ
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်ဝက်ဘ်ရှာဖွေသူများကသီးခြား URL များကိုသီးခြားစာမျက်နှာများအဖြစ်ရေတွက်မည်ကိုသတိရပါ။ သင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (ဂူဂဲလ်) အားဤ URL သတ်မှတ်ချက်များကိုအသိပေးခြင်းအားဖြင့်ဤအရာကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ crawl budget ကိုသိမ်းဆည်းပြီးထပ်တူအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သင်၏ sitemap ကို update လုပ်ပါ
သင်၏ XML sitemap ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်အခြားအကျိုးရှိသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုသင်၏အတွင်းပိုင်းချိတ်ဆက်မှုများကိုမည်သည့်နေရာတွင် ဦး တည်သည်ကိုနားလည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ sitemap အတွက် canonical URLs များကိုသာအသုံးပြုသင့်သည်။ သင်၏ sitemap သည် robots.txt တင်ထားသောနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်လည်းကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။
Hreflang tags များ
သင်၏အညွှန်းစာမျက်နှာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်ဤ tags များသည်ဝဘ်ရှာဖွေသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုသိမ်းဆည်းထားသောမူကွဲများအကြောင်းတတ်နိုင်သမျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂူဂဲလ်ကိုပြောပြခြင်းသည်သင်၏ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုရည်ညွှန်းရန်အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဤသို့ပြုရာတွင်၊ သင်၏ပထမဆုံးစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များတွင်ဤကုဒ်ကိုအရင်သုံးသင့်သည်။
<linkrel="အခြား" hreflang="lang_code" herf="url_of_page" />
"Lang_code" သည် support language အတွက် code ဖြစ်သည်။ မည်သည့် URL အတွက်မဆို <loc> element ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ဒေသ၏တည်နေရာဗားရှင်းကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်သင့် crawl ဘတ်ဂျက်ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးနေ ဦး မလားလို့သင်စဉ်းစားမိရင်ဟုတ်ကဲ့။ Crawl ဘတ်ဂျက်သည်သင်၏ site ကိုတည်ဆောက်စဉ်တွင်မှတ်မိရန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုသင်၏အမြတ်အစွန်းမြှင့်တင်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ SEO စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ဤအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။